Otutu Osisi: endinggbatị ndụ osisi gị - Atụmatụ Ugbo
Otutu Osisi: Extgbatị Ndụ Osisi Gị
Okpomọkụ dị oke oyi maka Osisi Osisi?
Oke Osisi Osisi N'ime
Overwintering ose Osisi n'èzí
A na-emeso ya dị ka afọ, ose a kụrụ ha n’èzí n’ite ma ọ bụ n’ogige izu ole na ole mgbe ntu oyi ikpeazụ gasịrị ma mee ka ha mịa ọkụ n’oké okpomọkụ ruo mgbe owuwe ihe ubi na-ada. You maara na ị nwere ike ịwụli elu na owuwe ihe ubi nke oge na-esote site na ịba ụba ose gị na-ekpo ọkụ n'ime ụlọ?
Ọ bụrụ na a maara na-ede ede dị ka ndị hụrụ ikpo ọkụ n'anya, kedụ ka osisi ose na-akụda mmụọ si arụ ọrụ? Site n'iji nlezianya na-elekọta, ọ ga-ekwe omume ịkọcha ose gị ka ọ bụrụ ịba ụra ma mee ka ha dịrị ndụ ruo mgbe ikpo ọkụ laghachi ma ha nwere ike ịmaliteghachi omume na-eto eto nkịtị. Nọgide na-agụ maka ndụmọdụ na ntuziaka ị ga - agbaso maka ịkụba osisi osisi kachasị amasị gị!
Ezi Ngwaahịa maka overwintering-ede:
Fiskars Steel Forpass Kwachie ịkwa osisi
Espoma Organic ite ite
Ogige Nchekwa Neem Mịpụta wepụ
Ose bụ mwute na mfe okpomọkụ mesiri. N’èzí n’abalị ọ bụla na-agbadata n’okpuru 55 degrees Fahrenheit nwere ike ịkwụsị uto na ịmị mkpụrụ ma nwee ike ime ka ahịhịa kpọnwụọ. Na ogo 32, osisi ose ga-anwụ. O gwụla ma ibi n’ogbe anaghị eru ezigbo oyi, i kwesịrị ichebe ose gị ka oyi ghara ịjụ gị oyi.
Ọtụtụ ndị nọ na gburugburu ebe obibi oyi a ga-amalite osisi ọhụrụ kwa afọ wee bulie ha dị ka kwa afọ. Nke a bụ nhọrọ mgbe niile. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere osisi osisi na-esiri ike ịchọta ma ọ bụ nke dị ike ma na ịchọrọ ịdebe ya? Winkpachapu ose na-enye gị ohere ịmụrụ afọ ọzọ nke ndụ n'ime ha n'agbanyeghị ihu igwe dị jụụ.
nkpuchi ihu mgbochi mgbochi maka iko
Dịka anwa na-adịkarị, osisi osisi chọrọ ihe ole na ole n'aka gị. Ha chọrọ oke okpomọkụ, ọ bụ ezie na ezughị iji mee ka osisi ahụ na-emepụta. Ha choro oge dormancy ka ha nwee ike zuo ike ma gbanwee ohuru maka afọ na-abịanụ nke okooko osisi na ịmị mkpụrụ. Ha chọrọ naanị ìhè zuru oke iji mee ka ha gawa.
Oge ụfọdụ, n’agbanyeghi mbọ anyị na-agba, ose anaghị alọghachi. Cheta, osisi ndị a na - ebukarị kwa afọ, ha nwere ike bụrụ ihe aghụghọ iji mee ka ndụ dị na ọnwa oyi. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ osisi, ị kwesịrị ịtụ anya na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọ gaghị eme ya.
Mana n'akụkụ dị mma, ndị na-eme ya nwere ike laghachite n'ọrụ. Ha ga-anọ n’ihu mkpụrụ ọhụrụ ọ bụla ị ga-akụ. Ọ bụ ezie na ha ga-eto akwụkwọ na alaka ọhụrụ, ha ga-ama ifuru na mkpụrụ osisi na mbụ. Ozugbo ha malitere imepụta ọhụụ n'oge opupu ihe ubi, ị nwere ike ịzụ ha ma kpalite mmepe ha ọzọ.
Ya mere, ka anyị gafere ụfọdụ ndụmọdụ maka ịchekwa osisi ndị ahụ na-aga n'oge oge oyi niile!
Ka ose bidoro ịda ụra, ha na-atufu epupụta ma kwụsị imepụta.
Nke mbụ, wepụ mkpụrụ ọ bụla fọdụrụ ma nyochaa epupụta gị na pests. Fesa ihe ọkụkụ na mmiri ga - enyere aka wepu pests na - egbu oge. Ọ bụrụ n’ịchọta ụmụ ahụhụ na-achọghị ka ị na-ese osisi gị, jiri ya mee ya were mmanu ụbọchị ole na ole tupu ịkwaga ya. Ekem ite na-ede ede ma wetara osisi n'ime ụlọ. Jide n'aka na enwere otu osisi na ite ọ bụla.
Chọta ebe dị n'ụlọ gị, okpuru ulo, ma ọ bụ ebe ndọba ụgbọala nke na-anọrọ ihe dịka 55 degrees Fahrenheit ma nwee ntakịrị ọkụ ma ọ sitere na windo ma ọ bụ ọkụ na-eto eto. Ọ dịghị mkpa ka ọ dị ọtụtụ, naanị ihe ga-ezuru gị iji kwenye na osisi ọ ka na-ada. Belata ịgbara ose otu ugboro n'izu ọ bụla. Ọ bụrụ na ala ahụ ka dị mmiri mmiri site na mmiri ikpeazụ, ị nwere ike ichere ogologo oge. Nwere ike ịga izu 3-4 n’agbata mmiri ma ọ bụrụ na ala ka dị mmiri mmiri!
Site na obere mmiri na gburugburu ebe dị jụụ, ose ahụ ga-akwụsị itolite wee bido ịra ụra. Akwụkwọ ya ga-anwụ, na-egosi na oge eruola ịkpụcha ahịhịa. Naanị belata ndị na-ede ede na obere alaka Y. Echegbula onwe gị, alaka ọhụrụ ga-apụta ma malite itolite ọzọ mgbe oge ruru iji mee ka ose pụọ na dormancy n'oge opupu ihe ubi!
Ihe dị ka otu ọnwa tupu ụbọchị ntu oyi ikpeazụ nke mpaghara gị, mee ka ose ahụ banye ebe a na-ekpo ọkụ nke nwere windo windo ndị ọzọ. Thekwanye osisi nkịtị ma na-agafe mkpịsị aka gị na uto ọhụụ na-egosi n'ihe dị ka otu izu. Ọ bụrụ na o mee, kelere onwe gị maka idebe ose gị afọ ọzọ!
Akara oyi na osisi ose n'ime.
Enwere ike imeri ihe ọkụkụ gị n'èzí n'ubi ahụ, ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ị bi na mpaghara 9 ma ọ bụ 10. ’ll ga-echedo ha ma kpoo ha ọkụ.
Ozugbo oge oyi nke abalị bidoro n'okpuru 50, ị ga-amalite ịhụ ihe ịrịba ama nke nrụgide oyi. Ọ bụrụ na gị na ose bụ akpa toro na ị nwere griin haus , ị kwesịrị ịkwaga ha n'ime griin haus. Ma osisi ndị toro na ala ga-enwe ike ịkpụ ma kpoo ya, ma ọ bụ chebe ya.
.B. oyi etiti nwere ike ịbụ azịza ya. Na isi, nke a bụ obere griin haus nke na-enye ohere n'ìhè mana ọta na-egbochi osisi gị na ihu igwe oyi. Nwere ike ịgbakwunye obere ndị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ọbụna eriri ọkụ na-ekpo ọkụ iji bulie ọnọdụ ikuku dị na etiti ahụ dabere na mkpa gị.
Ose gị nwere ike ịdị nwute. Ma ọ nwere ike ịga n'ihu na-adị ndụ ma na-eto eto ọ bụrụhaala na ọnọdụ okpomọkụ na-adịgide karịa ogo 50 na etiti oyi. O yikarịrị ka ị gaghị enweta mkpụrụ oyi n'oge okpomọkụ ndị ahụ. Ose agaghị ewepụta belụsọ ma ha dị ọkụ! Ma i nwere ike ikwe ka ha hie ura ma hie oge oyi. Cheta ibelata ha ozugbo ha batara.
Eringgbara kwesịkwara ibelata. Ọ bụrụ na mmiri na-ezo, ị nwere ike ọ gaghị achọ mmiri ma ọlị. Gbaa mbọ hụ na ala gị na-ehichapụ oke mmiri n'ụzọ dị mfe. Ose agaghị achọ ya n'oge oge oyi, na ọnọdụ mmiri nwere ike ime ka mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ tolite.
Ọ bụrụ na ị nọ n’ógbè ebe ọ̀tụ̀tụ̀ ikpo ọkụ na-adịkarị na mbara igwe ma ọ bụ n’okpuru, oyi ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. N'oge ahụ, ọ kachasị mma iwepu osisi gị n'ubi ahụ ma weta ha n'ime ụlọ. Idobe ose gị ka ọ dị ndụ ruo oge opupu ihe ubi bụ ihe mgbaru ọsọ. Na olile anya, ị ga-agbaso ndụmọdụ anyị ma nwee obi ụtọ na osisi ose gị maka oge nke abụọ!
Ajụjụ: Osisi ose ọ̀ ga-adịgide n'oge oyi?
Azịza: Eeh, mana a ga-echedo ha ma ọ bụrụ na ibi n'obodo ebe oyi na-atụ. Winkpachapu ose n'ime ụlọ bụ ụzọ dị mma iji malite oge na-esote gị na ahịhịa ndị siri ike, ndị tozuru etozu.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka osisi ose ga-ebi n'ime ụlọ?
A: Ọ bụrụ na edobe ya n’ebe na-ekpo ọkụ, anwụ na-acha, ma na-elekọta ya anya oge niile, osisi ose nwere ike ibi n’ime ụlọ ọtụtụ afọ. Ma ọ gwụla ma ha kwagara griin haus na-ekpo ọkụ ma debe ya n'okpuru ọkụ na-eto eto, osisi ose agaghị amị mkpụrụ n'ime ụlọ. Ose chọrọ okpomọkụ dị elu na ọtụtụ ọkụ iji wee amị mkpụrụ. Enwere ihe dị iche iche na-atọ ụtọ nke na-eto eto nke ọma ma ọ bụrụhaala na ị nwere windo ma ọ bụ ntụpọ ọzọ nke na-enweta ma ọ dịkarịa ala awa asatọ nke ìhè anyanwụ.
Ọ bụrụ na ị hụrụ ose na-ekpo ọkụ dị ka m hụrụ n'anya, ugbu a ị marala ịgbatị ndụ na arụpụta ihe ọkụkụ kachasị amasị gị! Enwere m ike ịkọ na ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na enwere obere ihe egwu, ị nwere ike tufuo osisi ma ọ bụ abụọ, ụgwọ ọrụ kwesịrị mgbalị ahụ.
ihe nkiri 10 kacha mma 2016
kedu ihe mere m ji na -enwe otu nrọ ahụ
Ọnọdụ ụcha ntutu na -ada 2020